Handuan | Abenzi Befenisha Ngokwezifiso Zokwezifiso
Abenzi Bokwakha Bokhuni Bezinkuni Ezijwayelekile eChina
Isitayela sabenzi befenisha yangokwezifiso ihlukaniswe kakhulu ngesitayela sesimanje nesitayela saseScandinavia. Inkampani ihlale isebenzisa izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme futhi ikhethwe ngokucophelela, futhi izidingo zobuciko zenzelwe ukwenza kahle.
Ifenisha eyenziwe ngokwezifiso
Isitayela Esihlukile Nesesimanje Sokuklama
Inqubo eqinile yokulawula iqinisekisa ukuthi izohlangabezana nokucaciswa okuqondile.
Khipha ku-internet Best emnyango emnyango wenyakela enyakatho North North North European Indlu emnyango Ikhaya Port Sport Storage Shoe Spore Storadom Spoe Sporeale Shoe Storadom Shoe Storadom Home Porch Shoe Umphakeli Wenkampani - Handsuan
Khipha ku-internet emnyango wesineke kakhulu emnyango weKhabhinethi North North North European Home Door Port Shoe Rack Simple Storadomprage Spore Sporeale Shoe Shoe Storadom Shoe Storadom Home Porch Shoe I-Commabice Home Porch Shoe Umphakeli.Umkhiqizo uqiniseke ukuphepha. Izinhlelo zokuphepha ezakhelwe ngaphakathi, njengokuvikela ngokweqile, ukuphepha ngokweqile, nokukhiya ukuphepha, kuqinisekisa ukusebenza okuphephile.I-Handuan Engcono Kakhulu Yesimzuliswana Esilula Esezingeni Elikhulu Esenyakatho North North European Home Door Port Rock Shoe Storadom Shoe Spore Sporeale Shoe Spore Storadom Inkampani - Handsuan
Ithebula lekhofi elisebenzayo
Itafula lekhofi elisebenzayo.
Itafula eliseceleni kombhede
Itafula eliseceleni kombhede.
Kucwaningweni lomkhiqizo nentuthuko, inkampani ino-R oqeqeshiwe futhi oncomekayo
& D iqembu, elihlanganisa uR& D, ukukhiqiza nokuthengisa.
Imikhiqizo yenkampani ifaka uchungechunge lwama-suite, uchungechunge lwegumbi lokuhlala, uchungechunge lwegumbi lokudlela, uchungechunge lwemibhede yezingane oluhlanganisiwe, iphakheji yehhotela lobunjiniyela, kanye nephakeji lendlu lonke. Imiklamo emikhulu uchungechunge lwefenisha yasekamelweni lokhuni, kufaka phakathi umbhede ophindwe kabili wokhuni nekhabethe lezingodo. Isitayela somkhiqizo wenkampani sihlukaniswe ikakhulukazi ngesitayela sesimanje nesitayela seNordic. Le nkampani ibilokhu isebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme ezisetshenzisiwe futhi yadlula Ukukhetha Ngokucophelela, ukuphelela kwezidingo zobungcweti, ngesitayela sayo sokuklama esiyingqayizivele, ubuciko obuhle kakhulu, kanye nensizakalo eqotho, ithole ukuthandwa ngamakhasimende, iwine ukubukeka kukazwelonke okungaphezu kweshumi nokuklama okusha okusebenzayo amalungelo obunikazi, futhi waba ngumklamo wokuqala wemikhiqizo yomkhakha Umholi.
Izinsuku ezingama-45 ziyabuya
Iminyaka engu-3 iwaranti
Isitoreji samahhala sezinsuku ezingama-90
Ukusatshalaliswa kwamadolobha ama-250
Foshan Handuan Ifenisha Co., Ltd. yasungulwa ngo-2012.
Itholakala eLecong, eShunde, eFoshan, eGuangdong, eChina, okuyisizinda esikhulu sokukhiqiza ifenisha emhlabeni. Ama-workshops ajwayelekile wesimanjemanje neqembu labasebenzi abasezingeni eliphakeme kakhulu, manje selinesisekelo sokukhiqiza samanje esingamamitha-skwele ayi-10,000, abasebenzi abakhona babantu abayi-100, inkampani yethula imikhiqizo yasekhaya edumile neminye imishini yolayini esezingeni eliphakeme ukuqinisekisa ukuvikelwa kwekhwalithi yomkhiqizo Ngenxa yezimo ezingokwemvelo, inkampani inoR
& D iqembu ekucwaningweni nasekuthuthukisweni komkhiqizo, kanye nethimba lezokukhangisa elinochwepheshe kanye nohlelo lokumaketha oluphelele kwezentengiso, okuhlanganisa uR& D, ukukhiqiza nokuthengisa.
Izitayela zomkhiqizo wenkampani zihlukaniswe kakhulu ngezitayela zesimanje nezitayela zeNordic. Ifenisha yasekamelweni elishisayo enamapulangwe iqukethe umbhede ophindwe kabili wokhuni nekhabethe lezingodo. Inkampani ihlale isebenzisa izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme futhi ikhethwe ngokucophelela. Izidingo zenqubo ubuhle, futhi isitayela sayo esihlukile sokuklama, ubungcweti obuhle kanye nensizakalo eqotho inqobile iningi Lamakhasimende athandwayo, lawina amalungelo obunikazi angaphezu kwamashumi ayisishiyagalolunye, futhi laba ngumholi ekwakhiweni kwasekuqaleni kwemikhiqizo yomkhakha.
Namathela kumqondo oholayo we-ergonomics, ezempilo kanye nokuvikelwa kwemvelo.
Umbhede ophakeme wobungcweti onombhede wombhede onogada embhedeni wengane ohlanganisa umbhede wengane umbhede wengane olula umbhede wombhede ongaxakeki abakhiqizi bombhede wokulala
Handuan ku-No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Isifunda saseNanhai, imikhiqizo yeFoshan City Main umbhede wobude nombhede we-guardrail embhedeni wengane umbhede womntwana ohlanganisiwe umbhede wengane umbhede wombhede olula wombhede wemisebenzi eminingi. IHanduan yenziwa isebenzisa amandla aqinile wezobuchwepheshe, imishini esezingeni eliphakeme. Inendwangu eqinile futhi eqinile egcina ukukhanya nokuma ukuqinisekisa ukubukeka okuphelile kwekamelo lokulala nobusuku obumnandi. IHanduan ihlolwe ukuzinza, ukusebenza nokusebenza ngokushesha kombala ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zomthetho embonini yezombhede.
Itafula lamabhuku elincane ledeski lamanje elincane elihlanganisiwe lokubhala lokuhlanganisa itafula lekhompyutha lasekhaya laseNordic kanye nefenisha yokufunda inhlanganisela yokufunda
Handuan ku-No.19, Kangtai South Road, block B, Shatou Industrial Park, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City Main products Modern minimalist desk bookcase iKhabhinethi edidiyelwe itafula lokugqoka laseNordic ithebula lekhompyutha lasekhaya nesihlalo esihlanganisiwe ifenisha yokufunda. UFoshan Handuan Furniture Co., Ltd.usebenzisa ikhwalithi ephezulu njengezinto ezisemqoka. Umkhiqizo ubeka ukuthembeka okufisayo. Izindlu zayo eziqinile zisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme nezinto zokwakha ukuvimbela noma yikuphi ukwethuka. I-Handuan yethu ingakhiqizwa ngezitayela ezahlukahlukene zokuklama nokucaciswa.